Madzimai eZanu-PF vari pamusangano
Nhengo dzemadzimai dzebato reZanu PF dzinoti dzingafara zvikuru kana mutungamiri weZanu PF, VaEmmerson Mnangagwa, vakadoma mudzimai kuti ave mumwe wevatevedzeri wavo mubato panopera musangano wekongiresi yechimbi chimbi neChishanu.
Kunyange nyaya yekuti panofanirwa kunge paine munhukadzi pavatevedzeri vaviri vemutungamiri weZanu PF isina kuiswa sechisungo pamusangano weInter-District Conference neChina muChinhoyi nhengo dzeZanu PF dzemadzimai dzinotarisira kudomwa kwemudzimai pachinzvimbo ichi.
Nhengo yepurovhinzi yemadzimai, Amai Marther Munondo, vati vanoda mumwe wetevedzeri vemutungamiri webato kuti ave mudzimai.
Amai Munondo vanoti mutevedzeri wemutungamiri wechidzimai ndiye chete anonyatsomirira zvido zvemadzimai kumusoro.
Patabvunza Amai Munondo kuti madzimai pane wavakasarudza here, Amai Munondo vanoti mutungamiri webato ndiye chete anodoma vatevedzeri vake vachiti zviri pachena kuti Amai Oppah Muchinguri-Rushesha ndivo mukuru pamadzimai ose nekudaro vanofanirwa kupihwa mukana wavo.
Mumwe mudzimai wekuHurungwe, Amai Gladys Takavarasha, vanoti vanotarisira kudomwa kwemudzimai semumwe mutevedzeri wemutungamiri webato sezvo madzimai ari mashoma muzvinzvimbo zvepamusoro.
Dunhu reMashonaland West rasunga zvisungo zvitatu zvekuti VaMnangagwa vave mutungamiri webato uyezve vari munyori wekutanga zvichivaita mutungamiri webato, kuti VaMnangagwa vamirire bato musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya.
VaKieth Guza, avo vatungamirira musangano wanhasi sezvo sachigaro VaZiyambi Ziyambi vanga vasipo, vaverenga zvisungo pakupera kwemusangano.
Sachigaro wevaimbove varwiri verusununguko mudunhu reMashonaland West, VaCornelius Muoni, vakatyamadza vanhu vakawanda pavarambidza vanhu kuti vaite maslogan ekushoropodza bato reMDC vachiti hapana chakaipa nekuve nepfungwa dzakapesana nedzemumwe munhu.
VaMuoni vanoti zvekuti pasi nemunhu zvakaipa sezvo zvisingaite kuti munhu ave nechishuwo.
Kongiresi yeZanu PF iri kuitwa zuva rimwe chete, Chishanu, kunyange hazvo yaimbonzi ichaitwa kwamazuva matatu uye ichapindwa nenhengo dzebato iri dzinosvika zviuru zvitanhatu kubva pazviuru gumi nezvishanu.